Izindaba - I-KF932 KF86 Relay Tester idlule ukuhlolwa kwesihlobo sikaZwelonke
Ngokukhethekile Ekuvivinyweni Kukagesi Namandla
Intelligent edluliselwe Test Setha
Isethi Yokuhlolwa Kokudluliswa Kokuvikelwa
Amamitha Amandla Amamitha
I-KF932 KF86 Relay Tester idlule ukuhlolwa kwesihlobo sikazwelonke
KF86 Intelligent edluliselwe Test Setha
Ngo-Okthoba 19, 2020 nje
I-KF932 entsha ephathekayo ye-KINGSINE IEC61850-Tester &
I-KF86 Digital-Analog All-in-1 Protection Relay Tester
Uphumelele ukuhlolwa kohlobo
Isikhungo Sokuhlolwa Kokulawulwa Kwekhwalithi Yezokulawulwa Kwezokuphepha Kwamandla Kazwelonke
Nesikhungo Sokucwaninga Amandla kagesi seGridi Yombuso,
Ngokuya ngezinga lokuhlola le-
I-DL / T-624-2010 izimo zeteknoloji zokuhlola i-Relay Protection Microcomputer &
I-DL / T-1944-2018 indawo efakwe ngesandla ehlakaniphile yamadivayisi we-digital digital test test imininingwane yezobuchwepheshe &
I-DL / T-1501-2016 idivaysi yokuhlolwa kokuvikelwa kwedijithali yedivayisi Izimo zobuchwepheshe
Yikuphi konke okutholwa ukutholwa okwaziwa umhlaba wonke kwe-CNAS-L1379 & PAL & ilac-MRA.
I-KF932 ephethwe ngesandla i-IEC61850 Testier ibamba iqhaza elibalulekile ekusebenzeni kwezinhlelo zamandla kagesi ngokuthembeka nangokuphepha. Yidivayisi yokuhlola esetshenziswa emkhakheni wobuchwepheshe wokuvikelwa kwe-microcomputer, ukuvikelwa kokudluliswa, isilinganiso sokuzijabulisa, nerekhodi lamaphutha.
Thobela i-IEC61850 ejwayelekile, isetshenziselwe ukuthunyelwa kokuvikelwa kwedijithali, Measure & control device, terminal terminal, Merge Unit and substation control system testing and detection.
4.3 'Isikrini sokuthinta kanye nekhiphedi, ukuhlangabezana nemikhuba ehlukile yokusebenzisa.
I-4400mAh umthamo omkhulu webhethri ye-lithium, umsebenzi oqhubekayo amahora angaphezu kwe-10.
Usayizi omncane, ≤0.75kg isisindo kulula ukusithwala.
I-KF86 Compact IEC61850 6-phase edluliselwe isivivinyo isethwe ngokunemba okuphezulu nesixazululo esigcwele (okuhambisana nenani lesampuli le-IEC61850 ne-GOOSE), ingahlangabezana ngokugcwele nazo zonke izidingo zokutholwa nokulungiswa kwamaphutha ama-IEC61850 IEDs, Merge Units, amasistimu wokulawulwa kwesiteshi kanye nokudluliswa kwendabuko kwendabuko.
Amachweba ayi-8 abonisa i-IEC61850 inani lesampula ne-GOOSE;
I-6x130V voltage ne-6x20A ukukhishwa kwamashaneli we-analog ngokunemba okuphezulu kakhulu;
I-GPS eyakhelwe ngaphakathi, ukusekela umsebenzi wokuvumelanisa we-IRIG-B;
Isikrini sokuthinta esingu-9.7 intshi nesisindo esingu-10kg sokusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi okulula noma nge-laptop;
IKINGSINE R&D yithimba elisebenza kangcono kakhulu, eliqukethe oPost-Doctors, Doctor, Masters kanye nochwepheshe bemboni.
Ithimba le-KINGSINE R & D belilokhu lidala njalo imikhiqizo emisha yokuthuthukiswa kokumaketha okufanelekile, njenge-Universal Relay Tester K3163i, i-Engybrick Power Monitoring Solution yokufakwa okulula nokunye.
IKingsine futhi ingabanikazi bezingcweti ezinamandla kanye nochwepheshe futhi iyakwazi ukuhlinzeka ngesixazululo sokuhlolwa kwamandla kagesi ngokuhambisana nokucaciswa kwekhasimende.
Ngomqondo wakhe wokuqamba we-All-in-One wokuqamba kanye namalungelo obunikazi amaningi, umkhiqizo we-KINGSINE uvunyelwe kahle futhi wanconywa yiChina China Institute of Metrology kanye nezikhungo zocwaningo zamandla zesitifiketi ngasinye sesifundazwe kanye ne-CE.
Isikhathi Iposi: Dec-31-2020
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe,
Ukwahluka Ukudluliswa Tester, Intelligent edluliselwe Tester, Isihloli sokudluliswa kokuvikelwa, Edluliselwe Test, Digital edluliselwe Test, Ibanga Ukuvikelwa edluliselwe Tester, Yonke Imikhiqizo